एन्टोनियो बुएरो भलेजो द्वारा "सीढीको इतिहास" का संक्षिप्त सारांश वर्तमान साहित्य
एन्टोनियो बुइरो भेलेजो द्वारा "सीढीको इतिहास" का संक्षिप्त सारांश
एनकर्नी आर्कोया | | विधाहरू, किताबहरु, थिएटर
को काम मा एन्टोनियो बुएरो भालेजो प्लेसहोल्डर छवि, A एक सीढीको इतिहास »२० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा एकै भवनमा बस्ने तीन पुस्ताले स्प्यानिश जीवनमा सामाजिक र अस्तित्वगत निराशालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मंचन गरेका छन्। सीढी, एउटा बन्द र प्रतीकात्मक ठाउँ, र समयको अनुभवहीन अनुच्छेदले चक्रीय र दोहोरिने संरचनालाई समर्थन गर्दछ जसले पात्रहरूको विफलतालाई रेखांकित गर्दछ।
1 कार्य एक
2 दुई कार्य
3 कार्य तीन
4 N भर्या ofको कथा Sy को सार
5 भर्या .को कथाको केन्द्रीय विषयवस्तु
6 एक भर्या .को कहानीमा पात्रहरू
6.1 भर्या .को भर्या generation कहानी
6.2 दोस्रो पुस्ता
6.3 भर्या .को तेस्रो पुस्ताको कथा
7 कथा को संरचना
8 भर्या .को अर्थ
9 एन्टोनियो बुइरो भालेजोको उद्धरण
पहिलो कार्य १ 1919 १ in मा एक दिन भयो। कार्मिना र फर्नान्डो, दुई जवान व्यक्तिहरू, जो एक साधारण भवनमा बस्छन्, सीढीको अवतरण वा "क्यासिनिलो" मा भेला हुन्छन्।
दोस्रो कार्य दश बर्ष पछि हुन्छ। अर्बानोले कार्मिनालाई उनलाई उनका पतिको रूपमा स्वीकार्न आग्रह गर्छिन्। एल्भिरा र फर्नान्डोको बिहे भएको छ।
यो तेस्रो ऐन १ 1949 XNUMX in मा प्ले हुन्छ जुन नाटक रिलीज गरिएको थियो। एल्विरा र फर्नान्डोको छोरा फर्नांडो र अर्बानो र कार्मिनाकी छोरी कार्मिना प्रेममा छन्, तर उनीहरूका बाबुआमाले आफ्नो असफलताका कारण कटुता र निराशाका कारण यो सम्बन्धलाई निषेध गरेका छन्।
N भर्या ofको कथा Sy को सार
A एक सीढीको इतिहास » एन्टोनियो बुइरो भेलेजोको नाटक (१ 1947 and and र १ 1948 14) हो, जसको लागि उनले लोप डि भेगा पुरस्कार पाए। यो अक्टुबर १ 1949, १ XNUMX XNUMX on मा म्याड्रिडको स्प्यानिश थिएटरमा प्रदर्शन भयो। यसमा स्पेनी समाजले यसको सबै झूट बोलेको छ। सीढी.
भर्या .को कथाको केन्द्रीय विषयवस्तु
भर्या .को कथाले हामीलाई धेरै व्यक्तिको कथा बताउँछ जो गरिबी र उनीहरूका पुस्ताहरूमा रहेका छन्, यथास्थिति कायम राख्छन्, तिनीहरू छोड्ने भए पनि। यद्यपि उनीहरूले आफ्नो अवस्था र त्यसबाट बाहिर कुनै बाटो फेला पार्दैनन् असन्तोष, ईर्ष्या, झूट, आक्रोशको कारण ... एक सीढीमा सबै छिमेकीहरू बीच। विशेष गरी यदि तिनीहरू मध्ये कुनै एक बाहिर खडा।
यसैले, एन्टोनियो बुएनो भालेजो हामीलाई निराश पार्छ, अरूबाट अलग रहन चाहान्छ र इनाम प्राप्त नगरी तल्लो वर्गमा संघर्ष गर्दछ यसले व्यक्तिलाई घोर्याइरहेको छ, उनलाई तीतो बनाउने र मानवमा भएका सबै नराम्रा चीजहरू फस्टाउन।
केही कथाहरू यसरी स्पष्ट हुन्छन् कि समाजको विश्वासयोग्य प्रतिबिम्ब हुन सक्छ, फर्नान्डोको सन्दर्भमा, जो किशोरी छँदा उनी एक महान र धनी वास्तुकार हुने सपना देख्थे; तर अझै बर्षौं बित्यो, यो देख्छ कि ऊ त्यो घरमा बस्दछ र अझै गरिब छ।
केही तरिकामा, लेखकले देखाउँदछ कि शिक्षा र बच्चाहरूको उपचार गर्ने तरिकाले उनीहरूलाई समान ढाँचा दोहोर्याउन प्रभाव पार्छ जुन उनीहरूलाई गरीबीबाट बाहिर जानबाट रोक्छ।
एक भर्या .को कहानीमा पात्रहरू
माथिल्लोबाट देख्न सकिन्छ, हिस्टोरिया डे उन्ना एस्केला केवल एक युगमा केन्द्रित छैन, तर तीन फरक परिवारहरूको तीन पुस्ताहरू फैलिएको छ र कसरी तिनीहरू फरक विकसित हुन्छन्। यसैले, त्यहाँ धेरै क्यारेक्टरहरू छन्, तर ती सबै एक पुस्तासँग मिल्दछ। यस अवस्थामा हामी कुरा गर्दैछौं:
भर्या .को भर्या generation कहानी
यसमा पात्रहरू हुन्:
डन म्यानुएल: ऊ धनी चरित्र हो जो त्यस ठाउँमा बस्छ तर अरू जस्तो नभई ऊ आफैंले गरेको पैसालाई छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छ। उसको "दाहिने आँखा" उसकी छोरी एल्वीरा हो, समस्या यो हो कि यो एक मनमोहक केटी हो, जो धनीमा बसिरहेकी थिई, वास्तवमा के महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्दैन।
डोआ बोन्डाडोसा (एसुनुसन): उनी फर्नान्डोकी आमा हुन्, जसले आफ्नो छोराको लागि सुखमय जीवन दिन सक्छिन्। धेरैलाई लाग्छ कि उनी धनी छिन्, तर वास्तवमा उनी त्यस ठाउँमा सबैभन्दा गरिब छिन्।
बेल: उनी तीन बच्चाहरु, त्रिनी, अर्बानो र रोजाकी आमा हुन्। उनका पति श्री जुआन हुन् र उनी एक तानाशाही महिला हुन् जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न मन पराउँछिन्।
ग्रेगोरियो: ऊ कार्मिना र पेपेको बुबा थियो, तर ऊ बित्छ र परिवारलाई दुःखदायी अवस्थामा पार्दछ।
उदार: उनी ग्रेगोरियोकी स्वास्नी हुन्, जो विधवा छिन् र आफ्नो पतिको गुमाएकोमा उनी दुखी छिन्। दुई बच्चा भए पनि, उनको मनपर्ने केटी केटी छ।
दोस्रो पुस्तामा, धेरै वर्ष बितिसकेको छ र पहिलोमा देखा परेका बच्चाहरू बढ्दैछन्। अब तिनीहरू युवा वयस्कहरू हुन् जो एक्लै जीवनमा हिंड्न थालेका छन्। यस प्रकार हामीसँग छ:
फर्नान्डो: कार्मिनाको प्रेममा। जे होस्, अरू कोही हुन चाहेको हो, र आफ्नो मुटुको निर्णय गर्नुको सट्टा उसले त्यो पैसाको लागि गर्छ, त्यसैले उसले एल्भिरासँग विवाह गर्दछ। त्यो बनाउँछ, केहि समय पछि, ऊ घमन्डी, अल्छी हुन्छ ... र बाँच्नका लागि भ्रम हराउँछ। उनका दुई बच्चाहरु, फर्नान्डो र मानोलोन पनि छन्।
कार्मिना: कार्मिना एक लजालु केटी को रूपमा शुरू हुन्छ जो कसैलाई विश्वास गर्न चाहँदैन। उनी फर्नान्डोको प्रेममा छिन्, तर अन्तमा उनले अर्बानोसँग विवाह गरी। उनको छोरीको नाम पनि छ।
Elvira: इल्विरा ह्वाइट्स र पैसाको बिचमा हुर्केकी छिन, त्यसैले उनीसँग कहिले पनि कुनै कुराको अभाव थिएन। यद्यपि उनी कार्मिनाको ईर्ष्यालु छन्।
Urbano: यो विश्वास गरिन्छ कि ऊ सबै कुरामा ठीक छ र ऊ अरू भन्दा माथि हुन सक्छ किनकि उसलाई बढी थाहा छ। ऊ रुखो छ, तर धेरै मेहनती, यथार्थवादी र जब पनि उसले सहयोग गर्न कोसिस गर्दछ।
Pepe: कार्मिना भाइ। ऊ एक मान्छे हो, जसरी जीवन बित्दछ, ऊ झन दु: खी र खपत हुन्छ। अन्तमा, उसले रोजासँग विवाह गरे पनि ऊ एक महिला र मदिरा हो।
रोसा: उनी अर्बनोकी बहिनी हुन्। उनी पेपेसँग बिहे गर्छन् र उनको विवाहले उनलाई दयनीय जीवनतर्फ लैजान्छ, जसको साथ तिनीहरू जीवनमा मर्दछन्।
Trini: उनी अरूसँग राम्रा र राम्रा भए पनि अविवाहित रहिन्।
भर्या .को तेस्रो पुस्ताको कथा
अन्तमा, तेस्रो पुस्ताले हामीलाई तीन पात्रहरू प्रस्तुत गर्दछ, जो पहिलेको अघिल्लोमा झल्किन्छ:
फर्नान्डो: एल्वीरा र फर्नान्डोको छोरा, आफ्नो बुबा जस्तै धेरै आकर्षण, अस्पष्टता, गिगोलो इत्यादिमा। उनी भविष्यको लागि योजना बनाउन मन पराउँछन् र उनको क्रुश कार्मिनाकी छोरी कार्मिना हो।
मानोलिन: उहाँ फर्नान्डोको भाइ हुनुहुन्छ र उहाँ सँधै परिवारको प्रिय हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले हरेक चोटि उनी फेर्न पाए पछि फर्नान्डोसँग मेसेज गरे।
कार्मिना: ऊ कार्मिना र अर्बानोकी छोरी हो, जुन आफ्नो जवानीमा उनको आमासँग धेरै समान देखिन्छ। उनी पनि फर्नान्डोको प्रेममा छिन्, तर उनको परिवारले उनीसँग सम्बन्ध भएको चाहँदैन।
कथा को संरचना
सीढीको कहानीसँग उपन्याससँग मिल्दोजुल्दो संरचना छ, जहाँ तपाईंसँग परिचयात्मक भाग, गाँठ, वा द्वन्द्व; र परिणाम को एक हिस्सा जुन एक अर्थमा, अन्त्य छ जस्तो देखिन्छ जुन पात्रहरूमा बारम्बार दोहोरिन्छ।
विशेष रूपमा, यस कथामा तपाईंले निम्न पाउनुहुनेछ:
निस्सन्देह यो इतिहासमा पहिलो पुस्ता हो, त्यस पछि पात्रहरूको उत्पत्ति बताइएको छ, ती बच्चाहरू देखा पर्दछन् र जो समय जम्प पछि नायक हुन जाँदैछन्।
गाँठ वा विवादास्पद, उपन्यासहरूमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिइने अंश हो किनकि यो त्यहाँ हुन्छ जहाँ यो सम्पूर्ण सार हुन्छ। र यस अवस्थामा, गाँठ नै सम्पूर्ण दोस्रो पुस्ता हो जहाँ तपाईं उनीहरू कसरी बाच्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ, निराशा, ग्रिड्स, झूट, आदि।
अन्तमा, अन्त्य, जुन वास्तवमै खुला छ र जुन एउटै ढाँचाको अनुसरण गर्दछ ताकि सबै कुरा दोहोर्याइन्छ, यो तेस्रो पुस्ता हो, जहाँ यो देखिएको छ कि बच्चाले आमाबाबुले जस्तै गल्तीहरू गर्न जाँदैछन्। र यी पनि उनीहरूलाई के गर्न प्रोत्साहन।
भर्या .को अर्थ
एक सीढीको ईतिहासको मुख्य तत्वहरूमध्ये एक सीढ़ी नै हो। यो एक को बारे मा छ फ्लेप्लेबल एलिमेन्ट, जुन त्यहाँ बर्षौं बित्दै जान्छ, र पुस्ता, पुस्ता पछि यो त्यो स्थानका सबै छिमेकीहरूको मिलनको लिंकको रूपमा रहन्छ।
यद्यपि यसले समयको बित्तालाई पनि देखाउँदछ, जहाँदेखि सुरूमा एउटा नयाँ, चम्किलो सीढी देखिएको छ, र समय बित्दै जान्छ, र सबैभन्दा माथि गरिबीको त्यो सागरमा जारी छ र बाहिर उभिन सक्षम छैन, यो छ खपत, यो अधिक पुरानो, अधिक रन-डाउन हुन्छ।
यस तरिका मा, भर्या। आफै एक अर्को चरित्र बन्छ जुन सबै पुस्तामा उपस्थित छ र अन्य चरित्रहरूको जीवन, चिन्तित, मौन रहेको छ।
एन्टोनियो बुइरो भालेजोको उद्धरण
यदि तपाईंको प्रेमको अभाव छ भने, म धेरै कुरा शुरू गर्नेछु।
तपाईलाई अझै याद गरीरहेको देखेर यो निकै राम्रो लाग्यो।
हतार नगर्नुहोस् ... त्यहाँ कुरा गर्न धेरै कुरा छ ... मौन पनि आवश्यक छ।
म तिमीलाई तिम्रो उदासी र वेदनामा प्रेम गर्दछु। तपाइँसँग कष्ट भोग्नुपर्‍यो र तपाइँलाई खुशीको झुटो संसारमा नलगाउनुहोस्।
तिनीहरूले आफूलाई जीवनबाट जित्न दिए। तीस वर्ष यो सीढी भन्दा माथि बित्दै गयो ... दिन प्रति दिन अधिक पेसी र अश्लील बन्छ। तर हामी आफूलाई यस वातावरणबाट पराजित हुन दिनेछैनौं। होइन! किनकि हामी यहाँ छोड्नेछौं। हामी एक अर्कालाई सहयोग गर्ने छौं। तपाईंले मलाई सहायता गर्नुहुनेछ, यो दयनीय घर सदाको लागि छोड्न, यी निरन्तर झगडा, यी स्ट्रिटहरू। तपाईं मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, हैन? कृपया मलाई हो भन्नुहोस्। मलाई भन! (पुस्तकबाट वाक्यांश A एक सीढीको इतिहास »).
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » एन्टोनियो बुइरो भेलेजो द्वारा "सीढीको इतिहास" का संक्षिप्त सारांश
कार्लोस एलोन्सो पेरेज भन्यो
Aitami meee जवाफ
कार्लोस एलोन्सो पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
स्टीफनी मेयर फिर्ता छ। अगस्तको लागि नयाँ ट्वायलाइट सागा पुस्तक
"क्याम्पोस डे क्यास्टिला" को विश्लेषण